Misikiti ichavhurwa riini? Kunamata Kuchatanga Rini muMosikiti neMasjids? | RayHaber | raillynews
mushaTURKEYCentral Anatolia Region06 AnkaraMisikiti ichavhura riini? Kunamata Kuchatanga Rini muMosikiti neMasjids?
23 / 05 / 2020 06 Ankara, Central Anatolia Region, GENERAL, musoro wenyaya, LAST MinUTE, TURKEY
Misikiti ichavhurwa riini? Kunamata kuchatanga riini kumisikiti nemamisikiti?
Mudenderedzwa yakatumirwa nebazi rezvemukati kune maGurukota e81 ehurumende, mhando nyowani yekoronavirus (Covid- 19) mukati mechikamu chekubuda kwematanho akatorwa neDirectorate of Religious Affairs kuitira kudzivirira kupararira muTurkey; Kubva musi wa 16 Kurume 2020, zvakayeuchidzwa kuti kudzamara denda ratorwa, nyika dzese dzema mosque dzakapindirwa neungano.
Parizvino padanho, zvakataurwa kuti nhanho dzinofanirwa kutorwa yekuvhurwa kwemasikiti uye masjids kuti anamate paMusangano weCabinet, wakaitwa pasi pemutungamiri weMutungamiri Recep Tayyip Erdogan nemusi weMuvhuro, zvakatemwa kuti masikati, masikati neChishanu minamato inogona kuitirwa neungano mumisikiti mukati megadziriro yemirairo inofanirwa kutarisirwa neChishanu, 29 Chivabvu 2020. zvakaratidzwa.
Hutsanana, hukama hwemagariro etc. izvo zvinofanirwa kuteererwa munzvimbo dzinofanirwa kusunganidzwa pamwe chete neDare reSainzi. kufunga nezvemirairo Sezvo weChishanu, Chivabvu 29, 2020 Mitemo yakatemerwa Ministries yakakodzera uye Dhairekita rezvitendero zvakanyorwa mudenderedzwa seinotevera:
1) Izvo chete mumosque uye masjids nenharaunda masikati, masikati uye friday Minamato yake ichaitwa. Dzimwe nguva, mamosque uye masjid anozochengetwa akavhurika kune avo vanoda kuita minamato yega.
2) Yakavharwa nenguva Yambiro yakakosha / ruzivo ruchapihwa kuvagari nevaya vane zviratidzo zvehurwere kuti vagare pamba.
3) Iyo mosque gadheni / chivanze inonyanya kuvhurika nzvimbo. Zvinoenderana nemamiriro ekunze / mwaka, mwaka nemasikati minamato inogona kuitwa musikiti. Minamato yeChishanu haizoitwe mumosque.
4) Kunyanya kutarisirwa kupfuura zvauchapihwa kucheneswa kwenzvimbo dzese dzemamosque uye masjid, iyo yakatanga kunamatwa neungano, nenzira dzakakodzera zuva rega rega. Mune yekuchenesa, nzvimbo dzinobata ruoko rwakanyanya, sekubatwa kwemusuwo, dzinopukutwa zvakanyanya nemidziyo yehutachiona.
5) Inowanikwa mosque uye masjid mamiriro emhepo uye mhepo yekufambisa haingashande, kuchengetedza magonhi nemahwindo akavhurika kuenderera kwemhepo yakakwana mosque uye mosque zvichapihwa.
6) Kuchengeta nzvimbo dzinozivikanwa kusvika shoma dzimba dzekubiridzira, zvitubu uye zvimbudzi zvichachengetedzwa. Ablution etc. kusangana nemosque uye masjids nekusangana nezvinodiwa kumba kana kunzvimbo dzebasa Ruzivo runodiwa / yambiro dzinopihwa kuungano.
7) Wese munhu, uyo achaita ungano, masikati, masikati uye Chishanu munamato, achafanira kupfeka mask yekurapa. Iye munhu / vanhu vasina mask haazotenderwa kunamatira muungano.(Vanozoita minamato yeumwe neumwe mumisikiti uye masjid vanofanirawo kupfeka mask.)
8) Inowanzo shandiswa mumosque uye masjids uye kuongororwa kuti uwedzere njodzi yekupararira / kutapurirana rozari, chibereko, shangu penya etc. zvinhu hazvibvumirwe.
9) Mapepa ekunyevera anosanganisira matanho anofanirwa kutorwa ekoronavirus nemirairo inotevedzwa kuitira kuti vanamate neungano mumisikiti nemisikiti (nekuwana kubva kumatunhu edunhu nevematunhu, vafti), ichadzvanywa nekukurumidza uye inorembera pamisikiti yose uye masjids.
10) Vanhu vanouya kumisikiti uye masjid vanozopihwa kuti vauye neminamato yavo yega. kana ichazopihwa nemahofisi e mufti nekupa munamato wekurasa. Kana minamato ichiitwa muchivanze cheMosque, vagari vedu vanoyambirwa kushamba rugs dzemunamato.
11) Munzvimbo dzese dzinofanira kunamatirwa, zvinoisa njodzi yekutapurirana kwechirwere uye hazvigoneke kuuraya hutachiona. parcel, kadhibhodi, saga uye mat etc. matsu haazoshandiswe.
12) Wese munhu achapinda mamisikiti uye masjid ekupinda nenzvimbo dzakatemwa semasikiti / nzvimbo dzekunamatira unopihwa kupukuta maoko.
13) Kuti muchengete nguva yakashandiswa pamwe chete mumisikiti uye masjids sepfupi sezvinobvira, Izvo zvichave chokwadi kuti nharaunda ichaziviswa kuti maruva eminamato anogona kuitwa kumba uye munamato unogona kuitirwa kumba..
14) Yambiro yakakosha ichadzokororwa kuti nharaunda vadzivise kubata kwenyama (kubatwa ruoko, kubatsirana, kukumbundirana nezvimwewo) uye kutevedzera mutemo wekushamwaridzana.
15) Inowanikwa mune mosque campus zviri mukati memakuva hazvizarurirwe vashanyikudzivirira kusangana nenzvimbo dzekunze dzematunhu iyo tambo ichadhonzwa kure kure kweakareba mita imwe.
16) Izvo zvichaita kuti zvive zvakaoma kuchengetedza nharaunda kure mumisikiti mevlit, hupfu hwekudya nezvimwe. Kudya hakubvumirwe pamitambo nemisikiti..
17) Matanho anotorwa vachipemha vapemhi pamberi pehusikiti achawedzerwa uye kunyanya kuratidzira kwakadaidzwa mushure memunamato weChishanu. miriwo, michero, zvipfeko, matoyi, etc. kutengeswa kwechigadzirwa hakubvumirwe.
18) Kuti muite minamato neungano zvinoenderana nemagariro ari kure mumisikiti uye masjid, pasi pekubatana kwaGavhuna / Vatongi Vamatunhu;
a) Tichifunga kuti munhu anoshandisa nzvimbo inosvika makumi matanhatu nemakumi mashanu neshanu neshanu (nzvimbo ichavharwa nemunamato ridge) munzvimbo dzakavharwa / chivanze / gadheni remumisikiti uye dzimwe nzvimbo dzinofanira kunamatirwa kuitira kuti ive kure nerwendo pakati pevanoita minamato. kumaka kuchaitwa pasi zvinoenderana nechimiro chakatumirwa mune annex, chinhambwe chemamita imwe kubva kune rimwe divi kubva kunzvimbo dzakanyanyisa yenzvimbo kunamatwa..
b) Iko kukwanisa kwakanyanya kwema mosque, gadheni / chivanze uye nzvimbo dzakashama kunamatwa dzicharoverwa pamusuwo wenzvimbo dzakataurwa nenzira yekuonekwa nevanhu vese. Kana huwandu hwevanhu vari mukati hunowana nzvimbo yakakwana, izvi zvichaziviswa maererano neungano yakamirira kupinda.
19) Chishanu Namata,
a) Kugadzwa na maGavhuna uye maGavhuna ematunhu (mukati merudzi rwekutarisirwa kwedunhu / district district) inogona kuvakwa mumisikiti ine bindu rakaringana / chivanze / nzvimbo yakavhurika.
b) Mumaguta umo mosque gadheni / mavanze haana kukwana pamwe nerondedzero yedunhu / yedunhu Mufti magavhuna ematunhu mumatunhu, uye munzvimbo dzakashama dzinoonekwa kuti dzakakodzera nemvumo yemagavhuna, minamato yeChishanu inogona kuitwa mukati mehurongwa hwematanho anotorwa..
c) Mukufunga matunhu ekuita minamato yeChishanu zvinhu zvakaita semwaka mwaka uye hupamhi hwenzvimbo uye kurerukirwa kwekupinda uye kubuda ichafungwa.
d) Misikiti (mavanze / magadheni) kuti icherechedzwe neVabati uye Vatongi Vamatunhu kuti vaite minamato yeChishanu uye nzvimbo dzakavhurika panguva ichangoburwa. 26.05.2020 ichaziviswa kuruzhinji ichishandisa nzira dzakasiyana siyana dzekutaurirana kusvika.
e) Nzvimbo dzakapfigwa dzemamosque dzinochengetwa dzichivharwa neChishanu.
f) Zvinodiwa zvekuchenjerera zvinotorwa kuitira kuti unzwe izwi zvakanaka munzvimbo iyi kuti riitwe paminamato yeChishanu uye kuti ionekwe neungano iyi mharidzo ichiverenga.
g) Nzvimbo dzakavhurika dzakatemerwa kuita minamato yeChishanu dzichanatswa / disinfavirira musati uye mumashure memunamato mukubatana pamwe nemataurisa.
h) Munguva yeminamato yeChishanu, ichatanga kugara kubva pachinzvimbo chekutanga uye iri ratidziro richiteverwa kudzamara chikamu chekupedzisira chazadzwa. Pakupera kwemunamato uye kutanga kubva pachinzvimbo chekupedzisira, zvichiteerana. Nhanho dzakakosha dzinotorwa kuti dzinosiya nharaunda kubva munamato yenzvimbo.. Kuitira kuti uone kurongeka uku, vanhu vanosvika vashanu vanoumbwa nemisikiti uye nzvimbo dzakashama dzemunamato wega wega zvichienderana nemazano emupari wedunhu / wedunhu nagavhuna / magavhuna ematunhu. Chishanu Kupiwa ichagadzirwa uye vashandi vemitemo vanopihwa.
i) Mugovera weChishanu uchave unoumbwa nevatungamiriri vechitendero, vanhurume veKoran kosi vadzidzisi uye mufti vashandi vanobva mumosikiti dzisiri kuita minamato yeChishanu. Muchiitiko ichi, kana pasina vashandi vakakwana, zvinokwanisika kupa kubva kune vamwe vashandi vehurumende. Zvakare, kana zvichidikanwa, nhengo dzesangano remuMosque dzinogona kupihwa chinangwa ichi.
Mabasa eChishanu Kupiwa,
j) Chishanu Kupiwa; Mukubatana nevashandi vemitemo vanofanirwa kugovaniswa, ungano inopinda munzvimbo dzokunamatwa mukati memamiriro akatsanangurwa muchikamu chino (kuturikira maoko, kupinda nechisiki, kuunza munamato wemunamato, nezvimwewo), vachitsanangura mamiriro aya zvichienderana neungano yakamirira kupinda kana huwandu hwevanhu vachipinda huchisvika nhamba yakatarwa. uye mushure memunamato, iye achashandira kuti ave nechokwadi chekuti nharaunda inobuda nekuchengetedza nzvimbo yekushamwaridzana.
k) Izvo zvine chekuita nekutanga kwemirairo yakatsanangurwa mune ino Dunhu neDunhu vashandi vemitemo vanopihwa. Masangano ekusimbisa mutemo achaita mabasa avo mukubatana neChishanu Delegations.
l) Munzvimbo umo minamato yeChishanu ichaitwa nematareji ekumanikidza, zvivharo zvemukati senge obliion barhibha, chipingamupinyi, tambo yemavara / ribhoni, mapurasitiki pontoon, nezvimwewo zvinoshandiswa kuve nechokwadi chekupinda / kubuda kwenharaunda nenzira yakadzora.
m) Minamato yeChishanu haizoparidzirwe, mharidzo dzinofanira kutumirwa neHutungamiri Hwezvinamato zvechitendero dzichaverengerwa pasina mimwe mhedzisiro uye sarudzo, uye kuedza kuchaitwa kuita minamato nekukurumidza.
Mundima iyi; Kuronga uye kupihwa mabasa kuchaitwa neVatungamiriri vedunhu / Matunhu ematunhu, mukudyidzana nematunhu emunharaunda pamwe nevezvinzvimbo zvakabatana, kuti zviite zvizere zvizere. Zviziviso zvakakosha zvinozoitirwa vagari vedu uye hapana matambudziko anosangana mukuita.
50 Price Kuwedzera ne Mosque uye Cable Car
Musikiti nemotokari yemoto vari kuuya kuIzmir!
Kushanyira TÜVASAŞ kubva kuMosque uye Quran Courses
Tram line yakabviswa musamende jindu mukuvakwa kwetsime rinopfuurira
Mosque neChete Car Uya kuIzmir!
Bursaray 'inomwa zvinodhaka mashekeri mari yakauya
Samsun Rail Rail Opera Station Inova Great Mosque Stop
Mosque chiri kuitwa xnumx.kez Airport muTurkey
Tram mu Mosque
Projectamlıca Mosque Project
Kukurukurirana pamusoro peiyo Mosque Project Enderera mberi
Nzira yeAkçaabat-Düzköy inotanga rini
Nguva Yokutanga Nechiedza Chekutya Rail System muTrabzon
Nguva yokutanga Bharıkesir rekudzidzisa chitima
YHT Expeditions ichatanga Rini?
Ndeipi Istanbul neAnkara vatengesi vemotokari vachatanga?
3. Airport project ichatanga rini